२४ घन्टाभित्र राजधानीका सबै एटिएम रित्याउने योजना थियो चिनियाँ ह्याकरहरुको | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
काठमाडौं– महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार शनिबार अपरान्ह चार बजे उनलाई प्रभु बैंकका अप्रेसन अफिसरले फोन गरे, ‘दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको एटिएम बुथमा मानिसहरुको अस्वभाविक चहलपहल भइरहेको छ।’
एटिएमबाट ४५ हजार रुपैयाँ निकालेका रहेछन्। झोला खानतलासी गर्दा २० वटा एटिएम कार्ड भेटिए। प्रहरीको आशंका बढ्यो। ती चिनियाँ नागरिकल‍े केही नबोलेपनि झोलामा हात्तिसारमा रहेको माया मनोहर बुटिक होटलको कोठाको साँचो भेटियो। प्रहरी तत्काल त्यस होटलतर्फ लाग्यो।
चार जना चिनियाँ नागरिक दुई वटा सुटकेश र दुई वटा झोला बोकेर होटलबाट निस्कँदै थिए। एटिएम बुथबाट लिइएका सिसिटिभी फुटेजसँग दाँज्दा ती चारै जनासँग अनुहार मिल्यो। प्रहरीले उनिहरुलाई लिएर होटलका कोठामा पुग्यो। सुटकेश र झोला खोल्यो। प्रहरी आत्तिए। त्यहाँ पैसा कोचीकोची राखिएको थियो।
‘शनिबार दिउँसो र रातभरमा राजधानीका सबै एटिएम बुथबाट पैसा निकालेर आइतबार क्यासिनो जाने र सोमबार चीन फर्कने उनीहरुको योजना रहेछ’, काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता बोगटीले भने। उनका अनुसार माया मनोहर बुटिक होटलमा चिनियाँ नागरिकको चार चार जनाको दुई वटा समूह थियो जो एक अर्कामा परिचित थिएनन्। तर दुवै समूह शुक्रबार मात्र नेपाल उत्रिएका थिए।
‘नबिल बैंकको एटिएम बुथबाट चिनियाँलाई नियन्त्रणमा लिँदा वरिपरी तीन जना चिनियाँ रहेको देखिन्छ। साथीलाई पक्राउ गरेपछि उनिहरु दौडँदै होटल पुगेर पैसा लिएर भाग्न खोज्दा पक्राउ गरेका हौँ’, डीएसपी बोगटी भन्छन्।
उनिहरुले कतिवटा एटिएम बुथबाट पैसा झिकेका थिए भन्नेबारे प्रहरी यकिन हुन सकेको छैन। ‘ एउटा एटिएम बुथ रित्याएपछि अर्कोमा जाने गरेको पाइयो। पैसा झिकेपछि होटल पुर्‍याइहाल्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ’, बोगटी भन्छन्।
कसको र कसरी झिकियो पैसा ?
एटिएम बुथबाट चिनियाँले पैसा झिकेको समाचार आएसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ। उनिहरुले बैंककै पैसा मात्र झिकेको दावी राष्ट्र बैंकको छ।
तर एटिएम प्रयोग गरेर सम्बन्धित बैंकको मात्र पैसा झिक्न कसरी सम्भव छ? यसअघि एटिएमबाट पैसा चोरी भएका घटनामा बैंक अकाउन्टका डाटा चोरेर खाली एटिएम कार्डमा भरि पैसा निकाल्ने गरेको पाइएको थियो।
व्यक्तिगत अकाउन्टको हकमा एटिएमबाट एक दिनमा एक लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिन्छ। स्रोतका अनुसार एटिएम बुथमा एकपटकमा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म रहन्छ। काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता बोगटी भन्छन् : ह्याकरले बैंकको सिस्टम ह्याक गरि डाटा चोरेर पैसा चोरेको देखिन्छ। सुटकेश नै लगेर पैसा थापेको देखिन्छ।
चोरिएको डाटा कसको थियो भन्नेबारे भने उनले केही खुलाएनन्। बैंकको मात्र पैसा थियो भने त्यतिधेरै एटिएमको किन बोकेका थिए ती चिनियाँल‍े ?
नेपाल बैंकर्स एसोएसिएनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ठुलो दुर्घटना टरेको बताए। उनले कसको पैसा झिकिएको स्पष्ट नपारे पनि बैंक झिकिएको पैसा पुर्ती गर्न सक्षम रहेको बताए। ‘ सर्वसाधारण ढुक्क हुनुस् तपाईहरुको पैसा केही हुने छैन। जसको पैसा झिकिए पनि पूर्ती गर्न हामी सक्षम छौँ।
दुई वटा बेग्लाबेग्लै समूह भएको तर एउटै होटलमा बसेकाले उनीहरुलाई परिचालन गर्ने अर्को व्यक्ति वा समूह हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ।
समाचार२४ घन्टाभित्र राजधानीका सबै एटिएम रित्याउने योजना थियो चिनियाँ ह्याकरहरुको